किन आउँछ गिजाबाट रगत ? – Mission
-डा. प्रकाश बुढाथोकी, दाँत एवं मुख रोग विशेषज्ञ, लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल, बुटवल
बिहानै उठ्दा मुखमा रगत आइरहेको हुन सक्छ । यही कारण मानिस दिनभरि चिन्तित हुनुपर्छ । ब्रस गर्दा रगत देखिएपछि कतिपय मानिस त रगत सिधिन्छ वा रोग लाग्छ भनी कैयौं दिन दाँत सफा गर्दैनन् रे । केहीले खाना चपाउँदा वा साह्रो चिज खाँदा रगत आउने भएकाले खाना नचपाई निल्ने गरेको सुनाउँछन् । यस्ता समस्यालाई गाउँघरतिर सुल वा हर्षा भनेर चिनिन्छ । गिजाबाट रगत आउनु सामान्य अवस्था नभई मुख, गिजा वा दाँतमा भएको फोहोर, शारीरिक रोग र केही औषधिको नकारात्मक असर पनि हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा चिकित्सकको सल्लाह जरुरी हुन्छ ।
दाँत तथा मुखसँग सम्बन्धित र शरीरसँग सम्बन्धित समस्याका कारण गिजाबाट रगत आउँछ ।
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, बैशाख ७, २०७३ 12:33:20 PM |
Prevग्रामीण क्षेत्रका नागरिक कृषि खेतीतर्फ आकर्षित
Nextभूमध्य सागरमा डुंगा दुर्घटना हुँदा ५ सय जनाको मृत्यु